कहिले पाउने जाजरकोटबासीले भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा ? २ महिनादेखि औषधि बितरण कक्ष बन्द – Vision Khabar
कहिले पाउने जाजरकोटबासीले भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा ? २ महिनादेखि औषधि बितरण कक्ष बन्द
। १७ चैत्र २०७४, शनिबार १५:१८ मा प्रकाशित
बीरबहादुर गिरी ।
जाजरकोट १७ चैत । कहिले चिकित्सक नहुने त कहिले औषधि अभाब जाजरकोटबासीले नियमित खेप्दै आएका स्वास्थ्य समस्या हुन यी । ८ बर्ष पहिलेको झाडापखालाको महामारी र २ बर्ष पहिलेको स्वाइन फ्लुको महामारी पछि जिल्लाको स्वास्थ्य समस्या समाधानको लागि सरकारले जाजरकोट जिल्ला अस्पतालाई २ बर्ष पहिले १५ सैयाबाट ५० सैयामा स्तर उन्नतिको घोषणा गर्यो तर जाजरकोटबासीका स्वास्थ्य समस्या भने उस्तै छन ।
अहिले जिल्ला अस्पतालमा उपचारको लागि आउने बिरामीले अरु औषधिको कुरा छोडौं सिटामोल समेत पाउदैनन । औषधि अभाबले औषधि बितरण कक्ष २ महिनादेखि बन्द गरिएको छ । निशुल्क बितरण गर्ने औषधि सकिएपछि डिस्पेन्सरी बन्द गरेका छौं खोलेर के गर्नु बिरामीले कराउछन जिल्ला अस्पतालका निमित्त प्रमुख डा. अमिन शाहीले भने । औषधिको माग सम्बन्धित सबै निकायमा गरेका छौं तर समस्या समाधानको लागि कतैबाट पहल भएको छैन निमित्त प्रमुख डा. शाहीले थपे ।
सरकारले जिल्ला अस्पतालहरूबाट ७२ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गरे पनि जाजरकोट अस्पतालमा भने सामान्य औषधि पनि पाइँदैनन् बिरामीहरुले । लामो समयदेखि औषधि अभाव भएको छ । उपाचारमा आउने बिरामी कुनै पनि औषधि नपाउने गुनासो गर्छन । दमको उपचारको लागि भर्ना भएकी नलगाड नगरपालिका ६ की गौरी बुढा अस्पतालमा आफुले कुनै पनि औषधि नपाएको बताउछिन । गाउँबाट केही राम्रो उपचार हुन्छ की भनेर जिल्लामा आए औषधि नै पाउदैन कस्तो हाम्रो जिल्ला हो बुढाले भनिन् । अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीले रोग बताउने औषधि किन्न सिफासि मात्र गर्ने गरेको बिरामीहरुको गुनासो छ ।
५० सैयामा स्तर उन्नति संगै न अस्पतालमा औषधि खरिदका लागि बजेट आउछ न त मन्त्रालय र बिभागबाट औषधि नै जिल्लाबासी सामन्य स्वास्थ्य सुबिधाबाट बन्चित छन । अस्पतालले औषधि खरिद गर्न नसक्दा र सरकारले निःशुल्क वितरण गरिने औषधि नपठाउँदा समस्या आएको हो । अहिले अस्पतालमा सिटामोल, जीवनजल, आइरन चक्की, ब्रोफिन, रेनिटेडिन, मेट्रो, एमोक्सिसिलीन, बुस्कोपान, कोर्टिन, भिटामिन बी कम्प्लेक्स, क्यामामिन लोसन, जिन्क ट्याब्लेट, पारासिटामोल सिरफ, आर एल क्योमक्स, अक्सिटोसन, जेन्टामाइस, फुस्रामाइट, सिप्रोलगायत अत्यावश्यक औषधिको अभाव छ । औषधि अभाबमा उपचारको लागि आउने बिरामीले खाली हात फर्कनु पर्ने बाध्यता छ ।
मौसम परवर्तनसँगै अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दो छ । तर, औषधि अभाबले भने बिरामी छटापटाउन थालेका छन । सिटामोलसमेत अस्पतालमा नपाउदा बिरामीले सरकारलाइ सत्तोसराप गर्ने गरेका छन । बरु पहिले कुनै पनि औषधि किन्नु पर्दैनथ्यो यो सैया थपेपछि त केही सबै औषधि किनेर खानुपर्ने बाध्यता छ भेरी नगरपालिका ३ का किरण कुमार भण्डारीले भने । अहिले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र निःशुल्क औषधि पाइरहेकाहरू बढी समस्यामा परेको भण्डारीको भनाई छ ।
अस्पतालमा डेलिभरी सेवाका लागि गज, कटन, ग्लोब्स र आरएलसमेत अभाव छख । स्थानीय सरकारको मातहत स्वास्थ्य संस्था रहने प्राबधान भए पनि ५० सैयाको भएका कारण भेरी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा औषधि खरिदका लागि प्रयाप्त बजेट छुट्याउन सकेन । नगरपालिकाले भने २५ शैयासम्मका अस्पतामा मात्र औषधि पु¥याउने आफ्नो क्षेत्राधिकार भएको नगर प्रमुम चन्द्र प्रकास घर्तिले बताए । तर पनि हामी समस्या समाधान पहल हुन्छ नगर प्रमुख घर्तिले भने ।
जिल्ला अस्पताल कागजी रूपमा स्तरोन्नति गरिएपछि सरकारले निःशुल्क औषधि दिन बन्द गरेको छ । स्तरोन्नति भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सेवामा कुनै परिवर्तन आउन नसकेको नागरिक अगुवा केशब जंग शाहले बताउँछन ्। उनले भने, ‘सुत्केरी गराउन र सामान्य घाउचोट भएका बिरामीको समेत प्लास्टर गर्न नसक्ने अस्पतालबाट अरू के आस गर्ने ? अस्पताल स्तरोन्नतिको नाममा औषधि आउन छाडेपछि स्थानीय निरास छन्।’
५० शैयाको अस्पतालको मापदण्ड भनेको विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्ने हो तर अहिलेसम्म एक जना पनि विशेषज्ञ चिकित्सक आएका छैनन्। सेवामा कुनै सुधार नभए पनि जिल्ला अस्पताललाई दिइने निःशुल्क औषधि त दिइनुपथ्र्यो, त्यो पनि कटौती भएको गैरसरकारी संस्था महासंघ जाजरकोटका अध्यक्ष वीरबहादुर बस्नेतले भने, ‘न विशेषज्ञसहित अस्पताल बन्यो न निःशुल्क औषधि दिने जिल्ला अस्पताल नै।’
५० शैया नाम मात्रको छ । बेड २५ वटा राखिएको छ । तर, स्तरोन्नति गरिएअनुसार जनशक्ति पूर्वाधार र अन्य व्यवस्थापन शून्यजस्तै छ। औषधि, आवश्यक उपकरण, दक्ष चिकित्सक, पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाइ, व्यवस्थित प्रयोगशाला र ब्लड बैंकलगायत सबैको अभाव हुँदा अस्पताल आफैं बिरामी छ । बेला बेला बिभिन्न खालका महामारीको चपेटामा पर्ने पर्ने जाजरकोटबासी लागि सरकारले देखाउनकै लागि अस्पतालको सैया बृद्धि गरेको हो । सैया बृद्धि संगै भरपर्दो स्वास्थ्य सुबिधाबाट जाजरकोटबासी बन्चित छन ।